ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ ဦးအေးမောင်နှင့် ဥပသကာ၏ပို့စ် | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ ဦးအေးမောင်နှင့် ဥပသကာ၏ပို့စ်	Posted by mm thinker on November 16, 2008
Posted in: Critic, Perspective.	Tagged: Religion.	ဥပသကာရဲ့ မေလေးသို့ပေးစာများ (၅) ပိဋကတ်ကောက်ကြောင်းဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာ ပေးထားတဲ့ Comment တွေကို ဖတ်ပြီး ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။
ထေရဝါဒနဲ့ မဟာယာန ဘာကွဲသလဲ ဆိုတော့-၁ – စာပေကျမ်းဂန် ရေးရာ – မဟာယာနက ပိဋကတ်ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်တယ်။ ထေရဝါဒက မပြင်ဘူး။ (ဗုဒ္ဓက ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခါနီးမှာ “ငါဟောကြားတဲ့ တရားတော်တွေကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်တယ်” Amendment လုပ်နိုင်တယ်လို့ ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ဖူးလို့ သူတို့က ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝိနည်းတွေကိုလည်း Amendment လုပ်တာ လက်လွန်ပြီး ဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေ မိန်းမယူတဲ့အဆင့်ပါရောက်ကုန်ပါတယ်။ ထေရဝါဒီတွေကတော့ ဘုရားက သွေးတိုးစမ်းရုံစမ်းတာ၊ တကယ်က ပြင်ဖို့ မလိုအောင် Complete ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။)
အဓိက ချေပရှင်းလင်းချင်တာတော့ အလှတရားရဲ့ ကော်မန့်ပါပဲ။ အဓိက ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်တဲ့ Force ဆိုပါတော့။ ပါမောက္ခ္ခဦးအေးမောင်ကလည်း အဘိဓမ္မာဟာ ဘုရားဟော မဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်ပြီး သူ့ရဲံ (ဗုဒ္ဓ၀ါဒ–နာမည်အစုံကို ရုတ်တရက် စဉ်းစားမရ) စာအုပ်မှာရေးခဲ့ ဖူးတယ်။ အဲဒီစာအုပ်မှာ အမှားတွေ ထောင်နဲ့ချီပြီးပါနေတယ်။ သိပ်လည်း အရေးမကြီးလို့ ဆရာတော်များ မဖြေရှင်းကြတာပါ။ အနောက်တိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ် အချို့ကလည်း အဘိဓမ္မာဟာ ဘုရားဟော မဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည် ယူဆတဲ့ အတွက် မလေ့လာဘဲ နေပြီး များစွာနစ်နာ ကြရပါတယ်။ (အလှတရား၏ ကော်မန့်)
(၃) အလှတရားပြောချင်တဲ့စာအုပ်ဟာ ဦးအေးမောင်ရဲ့ နာမည်ကျော် “ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓဝါဒ”ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်တွဲခွဲပြီး ထုတ်ဝေပါတယ်။ ကျနော် မသေခင် ခေါက်ခေါက်အခါခါဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခွင့် မရတော့ပါ။ စာအုပ်အဟောင်းတန်းမှာ ဈေးအကြီးဆုံး စာအုပ်ဖြစ်ပြီး နှစ်အုပ်တွဲရဖို့ အလွန်ခက်ပါတယ်။ (၄) အမှားတွေထောင်ချီကြောင်း၊ သိပ်အရေးမကြီးကြောင်း အလှတရားရေးသွားတာတွေ့လို့ အံ့သြမဆုံးဖြစ်မိပါတယ်။ ကျနော့်တသက် ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓဝါဒ နှစ်တွဲကို အမှားများပါသော စာအုပ်ဟုလည်းကောင်း၊ ပညာရှင်များ ကဲ့ရဲ့သည်ဟုလည်းကောင်း၊ ပစ္စလက္ခတ်စာအုပ်ဟုလည်းကောင်း တခါမျှ မကြားဖူးပါ။
�မြမိုး ဖြန်းဖြန်းကျိုးမျှ”ဟုသာ ဗုဒ္ဓဂေါဓမကို သိသောသူများထက် တကယ့်ဗုဒ္ဓ Philosophy ကို မြတ်နိုးသူများ၏ ဆွေးနွေးချက်ကို လိုလားလှပါသည်။ (၂) ကျနော်သွားလေရာ နိုင်ငံတွင် (ပြောသာပြောတာ တစ်နိုင်ငံတည်း ခဏခဏရောက်နေတာ) ပိဋကတ်သုံးပုံ စီဒီရွမ်နှင့် သမ္မာကျမ်းစာ ဓမ္မသစ်၊ ဓမ္မဟောင်းကို သယ်သွားပါသည်။ ဖတ်၍ မဆုံးနိုင်သောကြောင့်တည်း။ ကိုရ်ရမ်ကျမ်းစာကား အခါအားလျော်စွာဖတ်သည်။
၂ – အဘိဓမ္မာအကြောင်း ရေးစဉ် မနေ့က အသောက်များ၍ ခေါင်းကိုက်လာသောကြောင့် ကထာဝတ္ထုကို ပြန်နွေးရင်းတန်းလန်း ဖြေဖို့ရာ Chang တစ်ဗူး ပြေးဆွဲရပါသည်။ ၃ – စိတ်ပါလက်ပါ အရေးဆုံးပို့စ်များအနက် တစ်ခု ဖြစ်သည်။
← ဘရုတ်ဘရက်တိုင်းပြည်	Blog Vacation →	0 comments on “ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ ဦးအေးမောင်နှင့် ဥပသကာ၏ပို့စ်”
တားမြစ် ထားသော... on November 17, 2008 at 12:06 pm said:
အလှတရား on December 25, 2008 at 5:08 pm said: